Soo dejisan Recover My Files 5.2.1.1964 – Vessoft
Soo dejisan Recover My Files
Faylal ay ka bogsanayaan My – aalad awood inuu ka soo kabsado faylasha tirtiray ama laga badiyay. Kabsado My Files u saamaxaaya in ay soo kabsadaan faylasha weelna dambiisha, waayay in la wado formatting, tirtiray fayras ama lumay ay sabab u tahay guuldaraystay in nidaamka. Software la shaqeeyaa nidaamyada file caan ah oo kuu ogolaanaya in aad si loo soo celiyo files ku sidayaal macluumaad kala duwan. Kabsado My Files ayaa interface ah dareen iyo fududahay in la isticmaalo.
Recovery ee files tirtiray dambiishii
Recovery ee files lumay, maxaa yeelay formatting disc ah
Recovery ee files tirtiray fayraska
Recover My Files Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... SugarSync 3.7.3.3
العربية, English, Français, Español... Yandex.Disk 1.4.11.5218
English, Français, Español, Deutsch... Metapad 3.6 Standard iyo Lite